गोरखामा कृषि फर्म र होटल दर्ता बढ्यो | Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper
Published On : ८ फाल्गुन २०७६, बिहीबार ०७:३८
गोरखामा पछिल्लो समय घरेलु तथा साना उद्योगहरु दर्ता हुने क्रम बढेको छ । स्थानीय सरकारले अनुगमनमा कडाई र अनुदान दिन अनिवार्य दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान बनाएपछि उद्योग दर्ता हुने क्रम बढेको हो । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय गोरखामा चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि माघसम्म पाँच सय ७५ वटा होटल तथा रेष्टुरेन्ट दर्ता भएको छ । गत वर्षसम्म पाँच सय ७२ मात्रै दर्ता भएको थियो ।
संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले कृषिमा दिने अनुदान लिन अनिवार्य फर्म दर्ता गरेको हुनुपर्ने प्रावधानका कारण बढेको हो । दर्ता गरेका अधिकाशंले कुनै न कुनै सरकारबाट अनुदान लिएका छन् भने अधिकांश प्रक्रियामा छन् । अनुदान लिनकै लागि उद्योग दर्ता गर्ने लहर चलेको छ । ‘पेसा ब्यवशाय गर्न भनेर प्रक्रिया पूरा गरेर आएपछि हामीले दर्ता गरिदिन्छौँ’ कार्यालय प्रमुख पौडेलले भने ‘त्यसपछिको कुरा हामीलाई थाहा हुँदैन, नबीकरण गर्दा पुन आवश्यक कागजात खोज्छौँ ।’
कृषि तथा पशुपंक्षी पालनको फर्म दर्ता महिलाको नाममा गर्नेहरु धेरै छन् । पुरुषको नाममा उद्योग दर्ता गर्दा छ हजार एक सय रुपैयाँ लाग्छ भने महिलाको हकमा दुई सय रुपैयाँले हुन्छ । गत साउन, भदौ र असोज महिनामा दैनिक दुईदेखि चारवटासम्म नयाँ उद्योग कार्यालयमा दर्ता भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।
साउन यता १२ वटा ग्रिल उद्योग, २२ वटा राईस मिल, सात वटा निर्माण सेवा, एउटा ढाका उद्योग दर्ता भएका छन् । १२ वटा फर्निचर उद्योग, २९ वटा सिलाई, कटाई, १८ वटा कम्यूटर इन्स्टिच्यूट, १२ वटा ब्यूटी पार्लर दर्ता भएका छन् । नौ वटा इट्टा उद्योग, तीनवटा क्रसर उद्योग र १२ वटा फिरफिरे (बालुवा प्रसोधन ) उद्योग दर्ता भएको छ । १२ वटै गत वर्षको अन्यतिर गण्डकी गाउँपालिकाको बिभिन्न ठाउँमा दर्ता भएका छन् । क्रसर उद्योग गोरखा नगरपालिका क्षेत्रमा एक र पालुङटार नगरपालिकामा दुईवटा रहेको छ ।
वर्कसप, कपास उद्योग, ढुवानी सेवा, पाउरोटी उद्योग, मोवाईल मर्मत सेन्टर, ढुवानी सेवा लगायत विविध शिर्षकमा साउन यता ५९ उद्योग दर्ता भएका छन् । उद्योग दर्ता हुने क्रम साउन यता बढेपछि राजस्व पनि ह्वातै बढेको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले जनाएको छ । मदिरा र सुर्तिजन्य बस्तु बिक्री गर्न छुट्टै इजाजत लिनुपर्ने नियमका कारण रेष्टुरेष्ट दर्ता गर्ने क्रम बढेको हो । रेष्टुरेन्टबाट मदिरा र सुर्तिजन्य बस्तु बिक्री गर्न पाउने भएपछि ग्रामिण भेगका बजारका होटल समेत दर्ता हुन थालेका छन् ।